China NO.4 simbi isina machira Kugadzira uye Fekitori Huaxiao
Sino Stainless Simbi Kugona nezve NO.4 isina simbi machira
Maitiro akajairika eiyo isina simbi waya yekudhirowa maitiro anonyanya kuve akapatsanurwa kuita matatu marudzi: yakatwasuka sirika pateni (HL), nylon vein, uye chando pateni (NO.4), ayo zvakare akajairwa matatu marudzi.
1.Yakatwasuka silika (Bvudzi Mutsetse) tambo ndiyo isina kukanganiswa zviyo kubva kumusoro kusvika pasi. Kazhinji, iyo yekushandira yeiyo yakagadziriswa tambo yekudhira muchina inogona kufambiswa ichidzoka neshure.
2.Iyo nylon patani inoumbwa neakasiyana urefu uye urefu. Nekuti iro nylon vhiri rakapfava mukugadzirwa, rinogona kukuya zvisina kuenzana zvikamu uye kusvika patani yenylon.
3. chando pateni (NO.4) ndiyo inozivikanwa kwazvo, inoumbwa nechidiki chematanho, inogona kuwanikwa neshupu-senge sandpaper.
Iyo yekudhirowa maitiro inonyanya kunyanya mukushandisa kwesimbi isina simbi, uye iko kushanda uye maitiro anodikanwa. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, zvinodikanwa kugadzirisa uye kudzoreredza tambo yekudhirowa michina yekuburitsa yekupedzisira mhedzisiro, uye iyo yakazara dhizaini mhedzisiro.
Iko pamusoro peiri humbwa kunogona kungoshandiswa kune iyo lathe kana grinder. Izvo zvinongoda kurapwa kwepamusoro. Inogona kuve yakasungwa neakasarudzika abrasives uye ipapo yekumusoro lathe yakabwinyiswa ne sandpaper nemucheka mutsetse. Kana iyo chaiyo uye yepamusoro roughness iri kumusoro, muchina wekukuya unodiwa. Yakakwenenzverwa.
Kana iyo yepamusoro yadhonzwa, iyo mbishi yezvinhu sheet inowanzo kurapwa chete. Mushure mekumusoro kwebhodhi repakutanga kwakagadzirwa neNO.4 (chando) kana HL (brushed), chigadzirwa chakapedzwa chinogadziriswa (kufa, kudhirowa kwakadzika, nezvimwewo). Mushure meyakajairika nzira yekugadzirisa, chigadzirwa chakapedzwa chinogona kuchengetedza zvinoitika zvebhodhi repakutanga.
Straight oiri: Inofanira kureva oiri yakatwasuka waya, kudhirowa mushure mekukuya kwemafuta, pamusoro peinki inopenya mushure meinki, uyezve dura redhiza dhizaini, inova mhando yechando, zvakare ndeyekurapa kwepamusoro, ikozvino rwakapetwa ruzere rweinki rwakadhonzwa Ruchienzaniswa neyakajairika waya kudhirowa, iyo oiri-yekugaya yakatwasuka waya ine zvakanakira kujekesa brashi mameseji, yakashongedzwa magadzirirwo, yakanaka gloss uye yakanakisa yakazara maitiro, uye inoshandiswa zvakanyanya mukukwirisa erevheta nemimwe michina ine yakakwira nzvimbo zvinodikanwa. .
Pashure: BA isina simbi machira
Zvadaro: Nemazvo Stainless simbi machira